Ukukhiqizwa kwe-Biodiesel & Ukuguqulwa kweBiodiesel - Hielscher Ultrasound Technology
Uma wenza i-biodiesel, i-slow reaction kinetics kanye nokudluliswa kwamandla ompofu kunciphisa amandla akho okutshala kwe-biodiesel kanye nokukhiqizwa kwakho kwe-biodiesel kanye nekhwalithi. Izakhi ze-Hielscher ultrasonic zithuthukisa kakhulu i-transesterification kinetics kakhulu. Ngakho-ke i-methanol engaphezulu kakhulu ne-catalyst encane iyadingeka ekusetshenzisweni kwe-biodiesel.
I-Biodiesel evame ukukhiqizwa ku-batch reactors besebenzisa ukushisa nokuxuba umshini njengamandla okufaka amandla. Ukuhlanganiswa kwe-ultrasonic cavitational kuyinto okunye okusebenzayo kusho ukufeza ukuxuba okungcono ekusetshenzisweni kwe-biodiesel yezohwebo. I-cavitation ye-Ultrasonic inikeza amandla okusebenza okudingekile we-biodiesel transesterification yezimboni.
Transesteration (Amakhemikhali Biodiesel Ukuguqulwa)
Ukukhiqiza i-biodiesel kusuka kumafutha yemifino (isb soy, i-canola, i-jatropha, imbewu ye-sunflower noma algae) noma amafutha ezilwane, kuhilela ukusekelwa phansi ukudluliselwa kwe-fatty acids nge methanol noma i-ethanol ukunikeza ama-methyl esters afanayo noma e-ethyl esters. I-Glycerin iyinqubo engavinjelwe yalokhu kuphendula.
Amafutha omifino njengamafutha ezilwane ayi-triglycerides akhiwa ngamaketanga amathathu ama-fatty acids ahlanganiswe i-molecule ye-glycerin. I-Triglycerides yi-esters. Ama-Esters ayi-acids, afana nama-fatty acids, ahlangene nokuphuza utshwala. I-glycerine (= glycerol) isilapho esindayo. Esikhathini sokuguqulwa kwezinqubo ze-triglyceride esters ziphendulwa zibe yi-alkyl esters (= biodiesel) besebenzisa i-catalyst (lye) nesiphuzo esiphuzayo, isib. I-methanol, eveza i-methyl esters biodiesel. I-methanol ithatha indawo ye-glycerin.
I-glycerine – isigaba esinzima kakhulu – izogoba phansi. Biodiesel – isigaba sokukhanya – iyahamba phezulu futhi ingahlukaniswa, isb by decanters noma centrifuges. Le nqubo yokuguqulwa ibizwa ngokuthi i-transesterification.
Ukuphendulela okujwayelekile kwe-esterification ku Ukubhekwa kwe-batch kuthatha kancane kancane, futhi ukuhlukaniswa kwesigaba se-glycerin kudla isikhathi, ngokuvamile kuthatha amahora angu-5 noma ngaphezulu.
I-Ultrasonics for Biodiesel Production
"Sijabule kakhulu ngemishini nokusebenza kukaHielscher futhi sinenhloso yokufaka ubuchwepheshe be-Hielscher ultrasonication kuyo yonke imisebenzi yethu yesikhathi esizayo."
Todd Stephens, i-Tulsa Biofuels
Namuhla, i-biodiesel ikhiqizwa ngokuyinhloko ku-batch reactors. Ukuguqulwa kwe-biodiesel ye-Ultrasonic kuvumela ukucubungulwa okuhleliwe ngaphakathi. I-ultrasonication ingafeza a i-biodiesel isivuno esingaphezu kuka-99%. Izakhi ze-Ultrasonic ukunciphisa isikhathi sokucubungula kusukela ku-1 kuya ku-4 amahora batch processing kuze imizuzwana engaphansi kuka-30. Okubaluleke nakakhulu, i-ultrasonication iyanciphisa isikhathi sokuhlukanisa kusuka emahoreni angu-5 kuya kwangu-10 (usebenzisa ukuqhuma okuvamile) kumaminithi angaphansi kwengu-60. I-ultrasonication ibuye isisize ukwehla ukuze kube nesisindo se-catalyst edingekayo kuze kube ngu-50% ngenxa yokwenyuka kwemikhiqizo yamakhemikhali lapho kukhona khona i-cavitation (bona futhi Sonochemistry). Uma usebenzisa i-ultrasonication inani le-methanol elidinga kakhulu liyadingeka, futhi. Enye inzuzo yikhuphuka elibangelwa ukuhlanzeka kwe-glycerin.
Ukukhiqizwa kwe-Ultrasonic kwe-biodiesel kubandakanya izinyathelo ezilandelayo:
amafutha yemifino noma amafutha ezilwane ahlanganiswa ne-methanol (eyenza i-methyl esters) noma i-ethanol (ye-ethyl esters) ne-sodium noma i-potassium methoxyde noma i-hydroxide
umxube uvutha, isib. emazingeni okushisa phakathi kwama-45 no-65degC
ukuxuba okufudumele kuwukuthi i-sonicated inline imizuzwana emihlanu kuya kwemi-15
i-glycerin iphuma noma ihlukaniswe isebenzisa i-centrifuges
i-biodiesel eguqulwe ihlanzwa ngamanzi
Ngokuvamile, i-sonication ikhona kwenziwa ngcindezi ephakeme (1 kuya ku-3bar, ukucindezela kwe-gauge) usebenzisa ipompo yokuphakelayo kanye ne-valve emuva-ukucindezela i-valve eduze kwe-cell flow.
Ukuguqulwa kwezimboni ze-biodiesel ayidingi amandla amaningi e-ultrasonic. Ithebula elingenhla likhombisa izidingo zamandla ezijwayelekile zezinga lokugeleza ezihlukahlukene. Imfuneko yangempela yamandla ingathathwa ngokusebenzisa i 1kW iprosesa ye-ultrasonic ebhentshini-phezulu. Yonke imiphumela evela ezinhlolweni ezinjalo ze-bench-top ingaba senziwe kalula. Uma kudingekile, amadivaysi e-ultrasonic aqinisekisiwe e-FM ne-ATEX ayatholakala, njenge- I-UIP1000-Exd.
I-Hielscher inikeza imishini yokucubungula i-ultrasonic biodiesel, emhlabeni jikelele. Ngamaphrosesa ase ultrasonic kuze kube 16kW amandla ngedivayisi eyodwa, ayikho umkhawulo ebusweni besitshalo se-biodiesel noma umthamo wokucubungula.
Izindleko ze-Ultrasonic Biodiesel Manufacturing
I-Ultrasonication iyindlela ephumelelayo yokwandisa isivinini sokuphendula kanye nesilinganiso sokuguqulwa ekukhiqizweni kwe-biodiesel yezentengiso. Izindleko zokucubungula nge-Ultrasonic kubangelwa ukutshalwa kwezimali
for imishini ultrasonic, izindleko Umbuso kanye nokugcinwa. Okuvelele ukusebenza kahle kwamandla (chofoza ishadi ngakwesokudla) yamadivaysi e-ultrasonic e-Hielscher asiza ukunciphisa izindleko zesevisi futhi ngalokhu kuya yenza lokhu inqubo ngisho greener. Izindleko eziholela ekutheni i-ultrasonication ihluke phakathi 0.1ct no-1.0ct ilitha ngalinye (0.4ct kuya ku-1.9ct / gallon) nini esetshenziselwa ukuthengisa. Funda imininingwane eminingi mayelana izindleko zokulungiswa kwe-ultrasonic.
U-Hielscher Ultrasonics wathola i-Frost ehlonishwayo & I-Sullivan Technology Ukuvuselela Umklomelo Wonyaka ngokuqaphela ukuthuthukiswa kwenkampani ye-novel ultrasonics ubuchwepheshe bokukhiqiza i-bio-diesel. Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi.
Sicela usebenzise ifomu elingezansi, uma ufisa ukucela ulwazi olwengeziwe mayelana nokusetshenziswa kwe-ultrasound ekuguqulweni kwezebhizinisi kwe-biodiesel.
I-Biodiesel Small Scale Ultrasonication Setup
I-Ultrasonication ingasetshenziselwa ukuguqulwa kwamafutha ibe yi-biodiesel nganoma yisiphi isilinganiso. Isithombe ngakwesokudla (Chofoza ukuze ubone ukubuka okukhulu!) ibonisa isethaphu encane yokucubungula ama-60-70L (16 kuya kwangu-19 amalitha). Lona ukusethwa okujwayelekile kokufundiswa kokuqala nenqubo yokubonisa.
Lokhu kusetha kufaka izingxenye ezilandelayo:
eyodwa Ama-Watts angu-500 noma Ama-watts angu-1,000 idivayisi ultrasonic (20kHz) nge booster, sonotrode kanye flow flow cell
imitha yamandla yokulinganisa amandla namandla
I-80L yokucubungula i-tank (iplastiki, isib HDPE)
Ukushisa isici (1 kuya ku-2kW)
10L i-catalyst i-premix tank (i-plastic, isib HDPE)
i-catalyst premixer (i-stirrer)
ipompofu (centrifuge, mono noma gear) ye-approx. 10 kuya ku-20L / iminithi ku-1 kuya ku-3 ibhagi
i-back-pressure valve yokulungisa ingcindezi kuseli lokugeleza
isilinganiso sokucindezela sokucindezelwa kokuphakelayo kwesondlo
I-potassium Hydroxide (0.2 kuya ku-0.4kg, i-catalyst) ishaquliswa ibe ngu-approx. 8.5L I-Methanol engxenyeni ye-pre-mix tank catalyst. Lokhu kudinga ukugqugquzela i-premix yokuxhaswa. I-tank yokucubungula igcwele amafutha wezitshalo ezingama-66L. Amafutha atshiswa yi-element yokushisa kuya kuma-45 kuya ku-65degC.
Lapho i-catalyst ichithwa ngokuphelele eMethanol, i-premix catalyst ixubene namafutha atshisayo. Ipompo idla umxube esitokisini sokugeleza. Nge-valve yangemuva yokucindezela, ingcindezi ishintshwe ku-1 kuya ku-3barg (15 kuya ku-45psig). Ukuphindaphinda ngokusebenzisa i-ultrasonic biodiesel reactor kufanele kwenziwe nge-approx. Imizuzu engu-20. Ngalesi sikhathi, amafutha aguqulwa abe yi-biodiesel. Emva kwalokhu, ipompo kanye ne-ultrasound zivaliwe. I-glycerin (isigaba esinzima) iyohlukaniswa ne-biodiesel (isigaba sokukhanya). Ukuhlukaniswa kuthatha cishe. Imizuzu engama-30 kuya kwangu-60. Uma ukuhlukaniswa kuqedile, i-glycerin ingasuswa.
Njengoba i-biodiesel eguqulwe iqukethe ukungcola, ukuhlanza kuyadingeka. Ukuze kuhlanzwa, amanzi ahlanganiswe ne-biodiesel. I-ultrasonication ingazuza ukuxuba kwe-biodiesel ngamanzi. Lokhu kwandisa indawo esebenzayo ngenxa yokunciphisa usayizi we-droplet (bheka: i-ultrasonic emulsifying). Sicela ucabange ukuthi leyo sonication enamandla kakhulu inganciphisa amaconsi amanzi ukuze isayizi, ukuthi kwakhiwe umthamo oqinile ozodinga izindlela ezikhethekile (isib. I-centrifuge) ezohlukaniswa.
Plant Biodiesel Ukukhiqiza
I-flow chart-ngezansi ibonisa ukusetha okujwayelekile kwe-sonication in-line yamafutha ukuze kuguqulwe ibe yi-biodiesel. Chofoza eshadini ukuze uthole umbono omkhulu.
Ukuqhutshwa kwe-biodiesel okuqhubekayo nokuhlukaniswa
Kusethaphu ye- ukuqhutshwa kwe-biodiesel okuqhubekayo nokuhlukaniswa okuqhubekayo, amafutha ashisayo kanye ne-premix catalyst ixutshwe ndawonye ngokuqhubekayo besebenzisa amaphampu ajabulisayo. I-mixer static ene-static ithuthukisa i-homogeneity yesondlo ku-reactor ye-ultrasonic. Inhlanganisela yamafutha / catalyst idlula isisindo sokugeleza, lapho sidalulwa khona nge-ultrasonic cavitation for approx. Imizuzwana emihlanu kuya kwezingama-30. I-valve yangemuva yokucindezela isetshenziselwa ukulawula ingcindezi esitokisini sokugeleza. Ukuxuba okuxubile kufaka ikholomu yesiguquko phezulu. Umthamo wekholomu yesiguquko senzelwe ukunikeza cishe. Isikhathi sokugcina ihora eli-1 kukholomu. Phakathi naleso sikhathi, i Ukusabela kwe-transesterification kuqediwe. I-reaction glycerin / biodiesel mix iqhutshelwa ku-centrifuge lapho ihlukaniswa khona kuma-fraction e-biodiesel ne-glycerin. Ukuthunyelwa kokuthutha kubandakanya ukutholakala kwe-methanol, ukugeza nokumisa futhi kungenziwa ngokuqhubekayo, futhi.
Lokhu kusetha kuqeda biodiesel reactor amabhethri, agitators ezivamile kanye namathangi amakhulu okuhlukanisa.
Isivinini sokuphendula nge-Biodiesel Transesterification
Imidwebo engezansi ikhombisa imiphumela ejwayelekile yokuguqulwa kwamafutha e-rapeseed (ibanga lezimboni) i-methoxide ye-sodium (kwesobunxele) futhi i-potassium hydroxide (kwesokudla). Kuzo zivivinyo zombili, isampuli yokulawula (umugqa ohlaza okwesibhakabhaka) sasivezwe ekuxubeni okukhulu kwe-mechanical. Umzila obomvu umelela isampula esenzelwe ukufana okufakwe ngokufanayo ngokuphathelene nesilinganiso sevolumu, ukuhlushwa kwe-catalyst nokushisa. I-axis enezingqimba ikhombisa isikhathi ngemuva kokuxuba noma ukuxhuma, ngokulandelanayo. I-axis ebonakalayo ibonisa ivolumu ye-glycerin ehlelwe phansi. Lena yindlela elula yokulinganisa isivinini sokuphendula. Kuzo zombili imidwebo, i Isampuli esinikiwe (obomvu) iphendula ngokushesha kakhulu kunayo lawula isampuli.
Izixhumanisi ze-Biodiesel Supplies
Chofoza lapha ukuze uthole izixhumanisi kubaphakeli bamaphampu namathangi embonini ye-biodiesel.
Ulwazi lwezoMkhiqizo noKhuseleko
Sicela ufunde imininingwane ngezansi ngokucophelela, ukuvimbela izinkinga nemiphumela emibi yempilo.
I-Methanol iyingozi. Kungabangela ukuwohloka kwesisindo ngenxa yokusetshenziswa isikhathi eside. Ingafakwa izikhangiso ngesikhumba, futhi. Uma uphelelwa amehlo kungabangela ubumpumputhe futhi i-Methanol ingaba yingozi lapho igwinywa. Ngenxa yalesi sizathu, thatha izinyathelo ezidingekayo lapho usebenzisa iMethanol. Kunconywa ukuthi usebenzise i-respirator emihle, i-apron negravu yegabha.
I-potassium hydroxide (KOH) inobuthi futhi ibangela isikhumba sishise phezu kokuxhumana. I-ventilation enhle iyadingeka.
Qinisekisa ukuthi indawo yokusebenzela ikhululekile futhi igcwele umoya ukuvumela imishini ukuba ibaleke. Amaphilisi e-Vapor anopriji awaphumelelanga ngokumelene nemifutha ye-methanol. Uhlelo oluhlinzekiwe-air (SCBA — Ama-Apparatus aphethwe yi-Self-Contained Breathing Apparatus) inikeza ukuvikeleka okungcono emiphakathini ye-methanol.
Izingxenye ze-Biodiesel ne-Rubber
Ukugijima kwi-biodiesel eyi-100% isikhathi eside kungabangela izinkinga ezinxenyeni zenjoloba ezimanzi (ipompo, ukuqhuma, izindandatho) ze injini. Ukufakwa esikhundleni sezingxenye zensimbi noma i-rubber duty raber kungaba ukuqeda le nkinga. Ngaphandle kwalokho ungaxuba u-approx. I-diesel ejwayelekile ye-25% e-biodiesel yakho ukuvimbela izinkinga.
I-biodiesel, efana ne-methyl ester (RME) ephuziwe yi-fuel renewable ne-biodegradable. I-Biodiesel inezinzuzo ezimbalwa uma kuqhathaniswa namafutha omisiwe aqondile (SVO). Akudingi ukuguqulwa kwenjini noma ukuguqulwa kwamapayipi okusebenza ukuqhuba i-biodiesel kuma-diesel evamile. I-biodiesel ivame ukungezwa kuma-petrodiesel athengiswa ngamapompo namhlanje ukwandisa ukugcoba okuhlanzekile I-Ultra-Low Sulfur Diesel (ULSD), okuyinto enenzuzo kusukela i-Biodiesel ingenakho okuqukethwe okungesibabule.
I-Ultrasonic Reactor ithuthukisa ukusebenza kwe-Biodiesel Process